ဂျပန်လို “မိုး” ကို အမျိုးအစားခွဲထားတာ ၄၀၀ကျော်တောင်ရှိတယ် ! ?
ကြာ 22 Oct 2020, 9:13 မနက်
နေပူပူ မိုးရွာရွာ သက်တောင့်သက်တာရှိတဲ့ ထီးလေးဆောင်းပြီး အပြင်ထွက်ကြစို့ !
Tokyo မြို့လည်းရေအောက်ကိုရောက်သွားမှာလား ??!!!!
မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုနှုန်း ၂၀% ကျဆင်းသွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ?
ညဘက်အိမ်ပြောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ အကြောက်ဆုံးကဘာလဲ ? !!!!
အာဖဂန်နိစ္စတန်အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့သူ Tetsu Nakamura !! သေဆုံးခြင်း (၁) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ